ကမ္ဘာ့ရှားပါး စာရင်းဝင် ဧရာဝတီလင်ပိုင်းတွေ မျိုးတုန်းမသွားရအောင် ကူညီကြပါဦးဗျာ – CharTake
ကမ္ဘာ့ရှားပါး စာရင်းဝင် ဧရာဝတီလင်ပိုင်းတွေ မျိုးတုန်းမသွားရအောင် ကူညီကြပါဦးဗျာ
chartake | July 30, 2020 | KNOWLEDGE | No Comments
ဒီ Post ကိုရှယ်ခြင်းဖြင့် ကူညီကြပါဦး ။ (၆) လအတွင်း သေတာ (၆) ကောင် တောင်ရှိပြီ။ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း သေတာ (၂) ကောင်။ ရှော့တိုက် ငါးဖမ်းကြလို့ လင်းပိုင်တွေပါ သေကုန်တာတဲ့ ။ ပုံမှန် အချိန်ဆို ဖမ်းကြတယ်၊ ကင်းလှည့်တယ်။ ခုကကျ ကင်းမလှည့်တဲ့ အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ရှော့တိုက်ကြတာတဲ့။ သေကုန်တာပဲ …
လင်းပိုင်းလေးတွေက မျိုးပွါးဖို့လဲ ခက်တယ်။ ကြာလဲကြာတယ်။ ကြီးလာဖို့လဲ စောင့်ရတယ်။ အခုကျ ကလေး (၂) ကောင်နဲ့ အကြီး (၄) ကောင်တောင် သေကုန်ပြီ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောရရင်တော့ အသတ်ခံရတာပေါ့။ ပိုဆိုးတာက သေကုန်တာက အမလေးတွေ ချည်းပဲတဲ့။ မျိုးဆက်ပွါးဖို့ ပိုခက်သွားတာပေါ့ ။
ဧရာဝတီ လင်းပိုင်ဆိုတာ ရှားပါး ရေချို လင်းပိုင် အမျိုးအစားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၇၆) ကောင်ပဲရှိတော့တယ်။ အခု (၆) ကောင်တောင် သေဆိုတော့ (၇၀) ပဲကျန်မယ်။ ဒါတောင် မိုးတွင်းရေကြီးလို့ ရေစီးနဲ့ မျှောပါသွားတာ၊ ပြန်ရှာ မရတာတွေလည်း ရှိဦးမှာ။ ဒီကြားထဲ ရှော့တိုက် ငါးဖမ်းကြတော့ ပိုဆိုး။ အဖတ်ဆယ်မရ ဖြစ်မှာပဲ ကြောက်တယ်။
ရှော့တိုက် ငါးဖမ်းတဲ့ တံငါသည်မှ မဟုတ်၊ ရှော့တိုက်ဖို့ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး ရောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်း သေချာ ကိုင်တွယ်ရမယ် ထင်တာပါပဲ …. ကိုဗစ် မဖြစ်ခင်ကတော့ ဧည့်သည်တွေလာ။ လင်းပိုင်ကြည့်ကြ။ လှေတွေ သုံးကြနဲ့ဆိုတော့ အလုပ်ဖြစ်တယ်နဲ့ တူပါရဲ့။ ခုကျ ငါးရှာဖို့ မြန်မာ့ရှားပါး လင်းပိုင်တွေ မျိုးတုန်းတော့ မလိုဖြစ်ကုန်ပြီ ….
ဧရာဝတီ လင်းပိုင်ဆိုတာ တံငါးသည်တွေနဲ့ ငါးအတူတူ ဖမ်းပေးတဲ့ ဖိုးပြုံးချိုလေးတွေ မျိုးတုန်းလုနီး ကမ္ဘာ့ရှားပါး အမျိုးအနွယ် တစ်မ္ဘာ လုံးမှာရှိတဲ့ ကုလသမ္မဂက အစ၊ WWF, WCF, Green Peace နဲ့ NGO တွေအဆုံး ထိန်းသိမ်းဖို့ အားပေးကြတဲ့ ရှားပါး မျိုးစိတ်ပါ ။
အဲ့လို ကမ္ဘာမှာရော၊ မြန်မာမှာရော အင်မတန် ရှားပါးတဲ့ လင်းပိုင်လေးတွေ မျိုးမတုံးဖို့ ဝိုင်းကူညီပေးကြပါ။ ဒီထက်ထိရောက်တဲ့ စည်းကမ်းမျိုးနဲ့ စောင့်လျှောက်နိုင်အောင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကို ဝိုင်းပြောပေးကြဖို့ အနော်က မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
မျိုးတုန်းတော့မှ စုတ်တသတ်သတ်နဲ့ ဝမ်းနည်းနေတာထက် မျိုးမတုန်းခင်မှာ ကာကွယ်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ။ Save IrrawaddyDolphin ဆိုပြီး ဒီ Post ကိုရှယ်တာ၊ ပြန်ကူးတင်တာမျိုးနဲ့ ကူညီကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။ ကမ္ဘာကျော် မြန်မာ့ အမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်ဗျာ ။
Unicode … ကမ်ဘာ့ရးပါး စာရငျးဝငျ ဧရာဝတီလငျပိုငျးတှေ မြိုးတုနျးမသှားရအောငျ ကူညီကွပါဦးဗြာ
ဒီ Post ကိုရယျခွငျးဖွငျ့ ကူညီကွပါဦး ။ (၆) လအတှငျး သတော (၆) ကောငျ တောငျရပွီ။ ခုရကျပိုငျးအတှငျး သတော (၂) ကောငျ။ ရာ့တိုကျ ငါးဖမျးကွလို့ လငျးပိုငျတှပေါ သကေုနျတာတဲ့ ။ ပုံမနျ အခြိနျဆို ဖမျးကွတယျ၊ ကငျးလညျ့တယျ။ ခုကကြ ကငျးမလညျ့တဲ့ အခြိနျကို စောငျ့ကွညျ့ပွီး ရာ့တိုကျကွတာတဲ့။ သကေုနျတာပဲ …
လငျးပိုငျးလေးတှကေ မြိုးပှါးဖို့လဲ ခကျတယျ။ ကွာလဲကွာတယျ။ ကွီးလာဖို့လဲ စောငျ့ရတယျ။ အခုကြ ကလေး (၂) ကောငျနဲ့ အကွီး (၄) ကောငျတောငျ သကေုနျပွီ။ ခပျကွမျးကွမျး ပွောရရငျတော့ အသတျခံရတာပေါ့။ ပိုဆိုးတာက သကေုနျတာက အမလေးတှေ ခညျြးပဲတဲ့။ မြိုးဆကျပှါးဖို့ ပိုခကျသှားတာပေါ့ ။
ဧရာဝတီ လငျးပိုငျဆိုတာ ရးပါး ရခြေို လငျးပိုငျ အမြိုးအစားပါ။ မွနျမာနိုငျငံမာ (၇၆) ကောငျပဲရတော့တယျ။ အခု (၆) ကောငျတောငျ သဆေိုတော့ (၇၀) ပဲကနျြမယျ။ ဒါတောငျ မိုးတှငျးရကွေီးလို့ ရစေီးနဲ့ မြာပါသှားတာ၊ ပွနျရာ မရတာတှလေညျး ရဦးမာ။ ဒီကွားထဲ ရတိုကျ ငါးဖမျးကွတော့ ပိုဆိုး။ အဖတျဆယျမရ ဖွဈမာပဲ ကွောကျတယျ။
ရာ့တိုကျ ငါးဖမျးတဲ့ တံငါသညျမ မဟုတျ၊ ရာ့တိုကျဖို့ လပျြစဈဝါယာကွိုး ရောငျးတဲ့သူတှကေိုလညျး သခြော ကိုငျတှယျရမယျ ထငျတာပါပဲ …. ကိုဗဈ မဖွဈခငျကတော့ ဧညျ့သညျတှလော။ လငျးပိုငျကွညျ့ကွ။ လတှေ သုံးကွနဲ့ဆိုတော့ အလုပျဖွဈတယျနဲ့ တူပါရဲ့။ ခုကြ ငါးရာဖို့ မွနျမာ့ရပါး လငျးပိုငျတှေ မြိုးတုနျးတော့ မလိုဖွဈကုနျပွီ ….
ဧရာဝတီ လငျးပိုငျဆိုတာ တံငါးသညျတှနေဲ့ ငါးအတူတူ ဖမျးပေးတဲ့ ဖိုးပွုံးခြိုလေးတှေ မြိုးတုနျးလုနီး ကမ်ဘာ့ရပါး အမြိုးအနှယျ တဈမ်ဘာ လုံးမာရတဲ့ ကုလသမ်မဂက အစ၊ WWF, WCF, Green Peace နဲ့ NGO တှအေဆုံး ထိနျးသိမျးဖို့ အားပေးကွတဲ့ ရးပါး မြိုးစိတျပါ ။
အဲ့လို ကမ်ဘာမာရော၊ မွနျမာမာရော အငျမတနျ ရးပါးတဲ့ လငျးပိုငျလေးတှေ မြိုးမတုံးဖို့ ဝိုငျးကူညီပေးကွပါ။ ဒီထကျထိရောကျတဲ့ စညျးကမျးမြိုးနဲ့ စောငျ့လြာကျနိုငျအောငျ သကျဆိုငျရာတာဝနျရသူမြားကို ဝိုငျးပွောပေးကွဖို့ အနျောက မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။
မြိုးတုနျးတော့မ စုတျတသတျသတျနဲ့ ဝမျးနညျးနတောထကျ မြိုးမတုနျးခငျမာ ကာကှယျပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ ။ Save IrrawaddyDolphin ဆိုပွီး ဒီ Post ကိုရယျတာ၊ ပွနျကူးတငျတာမြိုးနဲ့ ကူညီကွဖို့ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ ။ ကမ်ဘာကြျော မွနျမာ့ အမှအေနဈကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရကျကွဖို့ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးမာ တာဝနျရပါတယျဗြာ ။